Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba ze-India Breaking » I-India Yembula Ukukhula Okukhulu Emkhakheni We-Drone
zezindiza • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba zikaHulumeni • Izindaba ze-India Breaking • Izindaba • Ezokuvakasha
Ukuthatha elinye igxathu ekufezeni umbono ohlangene we-Aatmanirbhar Bharat, uHulumeni Omkhulu ngaphansi kobuholi bukaNdunankulu waseNdiya uShri Narendra Modi, ukhiphe imephu ye-airspace yaseNdiya yokusebenza kwe-drone.
Ukuguqulwa kwezinqubomgomo ku-drone airspace kuzosiza ukukhula okujwayelekile ngokweqile emkhakheni we-drone olandelayo waseNdiya.
IDrones inikela ngezinzuzo ezinkulu cishe kuyo yonke imikhakha yezomnotho.
Ngokunikwa amandla ayo endabuko emisha, ubuchwepheshe bezokwaziswa, ubunjiniyela obonga imali kanye nesidingo sayo esikhulu sasekhaya, i-India inamandla okuba yindawo ye-drone yomhlaba ngonyaka we-2030.
Imephu ye-drone airspace iza njengokulandelwa kweMithetho ekhululiwe ye-Drone, 2021 ekhishwe nguHulumeni Omkhulu ngo-Agasti 25, 2021, uhlelo lwe-PLI lwama-drones akhishwe ngoSepthemba 15, 2021, kanye neGuospatial Data Guidelines eyakhishwa ngoFebhuwari 15, 2021. Zonke lezi zinguquko zenqubomgomo zizosiza ukukhula okujwayelekile ngokweqile emkhakheni we-drone ozayo.
KUNGANI AMADONONI ABALULEKILE?
Ama-Drones ahlinzeka ngezinzuzo ezinkulu cishe kuyo yonke imikhakha yezomnotho. Lokhu kufaka phakathi kepha akukhawulelwe kwezolimo, ezokumbiwa phansi, ingqalasizinda, ukubhekwa, ukuphendula okuphuthumayo, ezokuhamba, ukwenziwa kwemephu yendawo, ezokuvikela kanye nokugcinwa komthetho ukubala nje ezimbalwa. Ama-Drones angaba ngabadali abaqavile bokuqashwa nokukhula komnotho ngenxa yokufinyelela kwabo, ukwenza izinto ezihlukahlukene, nokusebenziseka kalula, ikakhulukazi ezindaweni ezikude nezingafinyeleleki zaseNdiya.
YINI UMTHELELA ONGENZEKA WALEZI ZINTO ZOKUQALA?
Ngenxa yemithetho emisha, uhlelo lwe-drone PLI kanye namamephu we-drone airspace afinyeleleka kalula, imboni yokukhiqiza ye-drones kanye ne-drone ingabona ukutshalwa kwemali ngaphezulu kwe-INR 5,000 crore eminyakeni emithathu ezayo. Imali engenayo yokuthengisa yonyaka embonini yokukhiqiza i-drone ingahle ikhule isuka ku-INR 60 crore emhlokweni we-2020-21 iye ngaphezulu kwe-INR 900 crore ku-FY 2023-24. Imboni yokukhiqiza i-drone kulindeleke ukuthi ikhiqize imisebenzi eqondile engaphezu kuka-10,000 kule minyaka emithathu ezayo.
Imboni yezinsizakalo ze-drone, efaka phakathi ukusebenza, ukwenziwa kwemephu, ukubhekwa, ukufafazwa kwe-agri, ukuphathwa kwempahla, ukuhlaziywa kwedatha, nokuthuthukiswa kwesoftware, ukubala ezinye, kuzokhula kube sezingeni elikhulu kakhulu. Kulindeleke ukuthi ikhule ibe ngaphezu kwe-INR 30,000 crore eminyakeni emithathu ezayo. Imboni yezinsizakalo ze-drone kulindeleke ukuthi ikhiqize imisebenzi engaphezulu kwama-500,000 eminyakeni emithathu.
Imephu ye-airspace yokusebenza kwe-drone iyatholakala ku- Ipulatifomu yesibhakabhaka yedijithali ye-DGCA.